Ma u baahan tahay Shatiga TV-ga?
Sida loo bixiyo lacagaha Shatiga TV’ka
Qodobada iyo shuruudaha
Gudaha UK, Channel Islands’ka iyo Isle of Man’ka, waxaad u baahan tahay Shatiga TV-ga haddii aad isticmaasho qalab si aad u daawato ama u duubato barnaamijyada TV-ga marka TV-ga laga soo deynayo (oo ay ku jiraan adeegyada satelite’yada ajnabiga ah).
Tan waxaa ka mid ah isticmaalidda kuwa soo socdo:
sanduuqyada dijitaalka ah
ama qalab kasta oo kale
Waxaad u baahan tahay hal Shatiga TV gurigiiba, xattaa haddii aad isticmaasho wax ka badan hal ka mid ah qalabka kor ku taxan.
Shatiga TV-gu wuxuu ku kacayaa £145.50 sanadkii TV-ga midabka leh, iyo £49.00 sanadkii teleefishinka madowga iyo caddaanka ah.
Daawashada TV-ga iyadoo aan laheysan shati aan shaqeyneyn waa fal damebiyeed. Haddii aad daawato TV-ga adigoo aan heysan shati shaqeynaya, waxa aad halis ugu jirtaa in lagu dacweeyo iyo ganaax gaarayo ilaa £1,000 (fadlan ogow, ganaaxa ugu badan gudaha Jersey waa £500, gudaha Guernsey waa £2000).
Hoos waxaad ka heli kartaa hababka kala duwan ee aad u iibsan karto Shatiga TV-ga.
Xusuusin la xiriirto luuqadda: fadlan ogow in, haddii aad gujiso mid ka mid ah links’yada bartan internetka, waxaa lagugu xiriirin doonaa bar internet oo luuqaddeedu tahay Ingiriis. Haddii aad jeclaan laheyd in aad isticmaasho adeegeena tarjumaadda telefoonka ah, fadlan wac 0300 790 6044 waxaadna la hadli kartaa qof ku hadlayo luuqaddaada.
Sida loo bixiyo lacagaha Shatiga TV-ga
Habka ugu sahlan ee aad u bixin karto lacagta shatigaaga waxaa weeye Direct Debit’ka, taas oo kuu ogolaaneyso lacag bixin bishiiba mar ama seddaxdii biloodba mar ah, ama waxaad bixin kartaa lacagta sanadka oo dhan hal mar. Direct Debit’ku waa lacagta oo si toos ah looga soo wareejinayo koontada aad bangigaaga ku leedahay. Mar allaale marka Direct Debit’kaaga la sameeyo, shatigaaga si toos ah ayaa loo cusbooneysiinayaa sanad kasta, kama welweleysid in aad noqoto shati la’aan – laakiin fadlan noo sheeg markii aad guri ka guurto si aan kuula rarno shatigaaga.
Waxa aad ku sameysan kartaa Direct Debit’ka online’ka ama wac 0300 790 6044 adigoo gacanta ku heysto macluumaadka bangigaaga (fadlan ogow in Direct Debit’ka seddaxdii biloodba marka ah uu ku kacayo £5 oo dheeraad ah sanadkiiba. Faldan waxaa kale oo aad ogaataa in bangiyada iyo ururada guriyeynta qaarkood aysan aqbalin Direct Debit’ka, sidaas darteed marka hore iska hubi).
Hab kale oo aad ku kala qaybqaybin kartid lacagta shatiga waa qorshaheena qayb bixinta, kaas oo kuu ogolaanayo in aad lacagta u bixiyso si todobaadle ah ama labo todobaadle lacag bixin ah oo u yar sida £5.60 todobaadkii. Wixii macluumaad dheeraada ah iyo sida loo sameysto arintan, fadlan wac 0300 555 0286 (fadlan ogow tani waa Ingiriis kali ah inkasta oo aad waydiisan karto in aad la hadasho qof ku hadlayo luuqaddaada).
Waxa aad ku bixin kartaa kuna maareyn kartaa Shatiga TV-gaaga qadka online’ka. Waxa aad markaa ka dib dooran kartaa in aad ku hesho shatigaaga email ahaan, iyo sidoo kale xiriirada kale ee aad naga heleyso (si aad arintan u sameyso, waxaa muhiim ah in cinwaanka emailkaagu ka kooban yahay xarfo Ingiriis ah oo kali ah.)
Waxa aad ka bixin kartaa Shatiga TV-gaaga halkan - ama debit’ka ama credit card’ka ama adigoo sameysanayo Direct Debit’ka.
Fadlan gacanta ku heyso macluumaadka bangigaaga una diyaargarow in aad ku dhameystirto foomka lacag bixinta Ingiriis ahaan.
Haddii aad leedahay debit’ka ama credit card’ka sida Maestro, Delta, Solo, Visa ama MasterCard, waxa aad ku bixin kartaa Shatiga TV-gaaga telefoon ahaan. Si sahlan u wac 0300 790 6044 adigoo gacanta ku heysto macluumaadka bangigaaga.
PayPoint goobta ah
Waxa aad aadi kartaa meel kasta oo ah goobta PayPoint si aad ugu iibsato Shatiga TV-gaaga kaash ahaan ama debit card-ka ahaan. Si sahlan ugu sheeg qasnajiga magacaaga iyo cinwaankaa.
Waxaa jiro qiyaas ahaan 22,000 goobood oo ah PayPoint UK oo dhan, waxaana kuwan ku jiri karo miiska kaashka ee dukaanka xaafaddaada, super market’ka ama garaashka. Goobo badan oo ah kuwa PayPoint ayaa furan saacado badan, todobo maalmood todobaadkii. Waxa aad ka ka heli kartaa goobta PayPoint ee maxalliga ah halkan ama adigoo wacayo 0300 790 6137 oo siinayo code-ka boostadada (fadlan ogow kani waa adeeg toos ah oo af Ingiriis ah).
Waxa aad jeeg u soo diri kartaa TV Licensing, Bristol BS98 1TL. Fadlan ka dhig jeegga in la siinayo 'TV Licensing' oo loogu talo galay lacagta shatiga oo buuxdo waxaadna xusuusnataa in aad ku qorto magacaaga, cinwaankaaga iyo code’ka boostada xagga dambe. Fadlan kaash ha soo dirin.
Kaarka keydka ee Shatiga TV-ga
Waxa aad keydin kartaa qarashka xigo ee Shatiga TV-ga isagoo ah mid yar, lacag la maareyn karo adigoo isticmaalayo kaarka keydka Shatiga TV-ga. Si sahlan ugu qaado kaarkan goobta PayPoint si aad u kordhiso keydkaaga kaash ahaan ama debit card’ka. Haddii aad si buuxdo u keydisay lacagta Shatiga TV-ga marka ay tahay in la cusbooneysiiyo shatigaaga, waxa aad si toos ah uga heli doontaa shatigaaga boostada.
Si aad in badan u ogaato una codsato kaarka keydka TV Licensing, fadlan wac 0300 555 0281 (fadlan ogow tani waa Ingiriis oo kali ah inkasta oo aad dalban karto in aad kula hadasho qof luuqaddaada).
Dhawaan guri ma ka guurtay?
Haddii aad guureyso, ama haddii qaar ka mid ah macluumaadka aan kaa heyno qaldan yihiin ama wax laga bedelay, fadlan noo sheeg adigoo booqanayo www.tvlicensing.co.uk/update ama warqad noogu soo dir halkan TV Licensing, Bristol BS98 1TL.
Ma tahay 75 sano jir ama ka weyn?
Haddii adiga ama qof kula nool jiro 75 sano ama ka weyn, waxa aad xaq u leedahay Shatiga TV-ga oo bilaash ah. Fadlan wac 0300 790 6044 adiga oo gacanta ku heysto lambarkaaga Caymiska Qaranka si aad u codsato shatigan.
Ma tahay 74 sano jir?
Haddii adiga ama qof kula nool jiro 74 sano ama ka weyn, waxa aad xaq u leedahay Shatiga TV-ga oo waqtiga dhow ah ilaa aad ka gaarto 75 sano. Fadlan wac 0300 790 6044 adigoo gacanta ku heysto lambarkaaaga Caymiska Qaranka wixii macluumaad dheeraad ah.
Ma tahay indhoole ama qof aragiisu aad u liito?
Haddii adiga ama kula nool uu yahay indhoole ama aragiisu aad u liito, waxaa laga yaabaa in aad u qalanto 50% sicir dhimis ah lacagta uu shatigaagu ku kacayo. Noo soo dir nuqul ah dukumiintigaaga diiwaangelinta indhoolenimada – ama shahaado uu qoray dhaqtarkaaga indhaha oo sheegeyso in aad indhoole tahay ama aragaagu aad u liito. Boosta ku soo dir iyadoo ay la socoto warqaddaada cusbooneysiinta shatiga (haddii aad mid heysato) iyo warqadda lacag bixinta kuna soo hagaaji TV Licensing, Blind Concessions Group, Bristol BS98 1TL. Way wanaagsanaan laheyd haddii aad ku soo dari karto lambar telefoon oo lagaala soo xiriiro.
Diyaar ma u tahay Dijitaalka?
TV wuxuu noqonayaa dijitaal, nawaaxi ka nawaaxi, inta u dhexeyso waqtigan xaadirka ah iyo 2012. Tan macnaheedu waxaa weeye in signalka TV-ga hadda jiro ee analogue’ga ah la demin doono laguna bedeli doono signalka dijitaalka ah. Bedelashada ka dib, waxa aad u baahan doontaa sanduuqa dijitaalka ah ama TV dijitaal ah si aad u sii hesho kanaalada TV-ga. Si aad wax badan u ogaato, booqo www.digitaluk.co.uk ama ka wac qadka caawimaadda UK halkan 0845 650 0085 (Ingiriis kali ah).
Qorshaha Caawimaadda Bedelashada (Switchover Help Scheme) waxaa wado BBC. Waxaanu halkan u joognaa in aan caawino qof kasta oo da’diisu ka weyn tahay 75, ama ah cuuryaan caawimaad u qalmo, anagoo siineyno qalabka iyo taageero la taaban karo oo la xiriirto u bedelidda TV-ga dijitaal. Warqad ayaanu usoo diri doonnaa qof kasta oo u qalmo waqtiyo badan ka hor inta uusan gobolkoodu bedelmin dijitaalka. Haddii aad dooneyso in aad ogaato warar dheeraad ah, fadlan wac 0800 408 5900 (Ingiriis kali ah) ama booqo www.helpscheme.co.uk.
Ma daawatid TV miyaa?
Haddii aadan daawan ama aadan duubin barnaamijyada taleefishinka marka ay ka socdaan TV-ga – haddey tahay TV, kombiyuutar, telefoonka gacanta, console’ka ciyaaraha, sanduuqa dijitaalka ah, duubaha DVD/VHS ama qalab kale – fadlan noo sheeg adigoo gelayo www.tvlicensing.co.uk/noTV ama wacayo 0300 790 6044. Waxaa dhici karto in aan arintan ku xaqiijino booqasho degdeg ah.
Shatigaaga uma baahnid miyaa?
Haddii aadan daawan ama aadan duubin teleefishinka sida tooska ah u socdo, waxaa dhici karto in aad u qalanto lacag celin. Fadlan nagala soo xiriir halkan 0300 790 6044 wixii macluumaad dheeraad ah.
Ma ku dhex nooshahay Channel Islands ama Isle of Man?
Haddii aad ku dhex nooshayay Isle of Man ama Guernsey oo adiga – ama qof aad la nooshahay – uu jiro 75 ama ka weyn, waxa aad xaq u leedahay Shatiga TV-ga oo bilaash ah. Haddii aad hadda jirto 74, waxa aad iibsan kartaa shati waqtiga dhow ah si aad ugu daboosho bilaha kaaga dhiman sanadguurada dhalashadaada 75’aad. Wac 0300 790 6044 adigoo wato taariikhdaada dhalashada iyo lambarkaaga Caymiska Qaranka si aad u codsato (arintan waxaa laga heli karaa qoraal xisaabeedka bangigaaga haddii lacagtaada howlgabka si toos ah loogu shubo koontadaaada bangiga.) Haddii aadan laheyn lambarka Caymiska Qaranka, fadlan na soo wac si loo diyaariyo caddeyn kale oo muujineyso taariikhdaada dhalashada.
Xusuusin muhiim ah oo loogu talo galay Channel Islands:
Haddii aad ku dhex nooshahay Guernsey, oo aad ka weyn tahay 65 aadna qaadato manfacyada gobolka, waxaa dhici karto in aad u qalanto shati bilaash ah. Fadlan kala xiriir Waaxda Dhowrista Bulshada (Social Security Department) halkan 732579.
Haddii aad ku dhex nooshayay Jersey, oo aad jirto 75 ama ka weyn dakhligaaguna hooseeyo, waxaa dhici karto in aad u qalanto in dib laguugu celiyo lacagta aad ku bixiso Shatiga TV-gaaga. Fadlan kala xiriir Waaxda Dhowrista Bulshada ee deegaankaaga halkan 445505.
Nasiib darro, deganayaasha Sark xaq uma laha shati haddey ka weyn yihiin 75.
Ma jiraan wax goobaha PayPoint ah oo ku yaal Channel Islands, haseyeeshee waxa aad ku bixin kartaa Xafiiska Boostada.
Marka aad na soo wacdo ama aad warqad noo soo dirto, fadlan xusuusnow in aad sheegto lambarkaaga Shatiga TV-ga haddii aad mid leedahay.
Iyadoo ah arin lagu koontaroolayo tayada, wicitaanada ku socdo kana imaanayo shati u sameynta TV-ga waxaa dhici karto in lala socdo ama loo duubo tababar ahaan si loo hubiyo in aan si joogto ah u horuumarinno heerarka adeegyadeena macaamiisha.
Macluumaadka shaqsiga ee la bixiyay waxaa isticmaali doono oo kali ah Hay’adda Shatiga TV-ga (BBC) iyo bixiyayaasha adeegyadeeda si loola socdo nidaamka Shatiga TV-ga, oo ay ku jiraan bixinta shatiga, lacag ururinta iyo dhaqangelinta. Lama siin doono qof kasto oo ka baxsan Shati bixinta TV-ga iyadoo aan marka hore la helin ogolaanshahaaga, ilaa ay qasab nagu noqoto ama uu sharcigu noo ogol yahay in aan sidaa yeelno. Wax allaale wixii la xiriira waydiimaha xafidaadda macluumaadka waxaa lagu hagaajin karaa The Data Protection Manager, TV Licensing, Bristol BS98 1TL.
Adiga waxaa loola jeedaa qofka magaciisu ku qoran yahay shatiga.
Qalabka TV-ga waxaa loola jeedaa qalabka teleefishinka soo qabto, sida TV set’ka, sanduuqa dijitaalka ah, duubayaasha fiidoyowga ama DVD’ga, kombiyuutarka, console’ka ciyaaraha ama teleefoonka gacanta.
Maxaa Shatiga TV-ga loogu baahan yahay?
Si loo isticmaalo Qalabka TV-ga looguna daawado ama duubo barnaamijyada TV-ga marka ay ka socdaan teleefishinka.
Tan waxaa ku jiro daawashada ama duubidda adeegyada la habeeyay iyo kuwa laga daawado satelite’yada TV ‘ga dibadda UK. Haddii aad daawato adeegyada dalabka ah, markaa shati uma baahnid.
Muxuu shatigaagu kuu ogolaanayaa?
Shatigu wuxuu u ogolaanayaa rakibaadda iyo isticmaalidda Qalabka TV-ga:
goobta shatiga leh qof kasta
gudaha gaari, doon ama caravan’ka:
Adiga iyo qof kasta oo si caadi ah kugula nool Adiga goobta shatiga leh (inta aan qalabka TV-ga loo isticmaaleyn caravan’ka aan dalxiiska aheyn iyo goobta shatiga leh isku mar).
qof kasta, oo ka shaqeeyo goobta shatiga leh (ilaa inta loo isticmaalyo gaariga, doonta ama caravan’ka arimo ganacsi).
Isticmaalidda qalabka TV-ga ee ku shaqeeyo beteriga meel kasto:
Adiga iyo qof kasta oo si caadi ah kugula nool Adiga goobta shatiga leh.
Muxuusan shatigaagu dabooleyn?
Qaybo kasta oo gurigaaga ka mid ah ee sharciyan gooni kaa ah tusaale ahaan ay degan yihiin kireysteyaal ama la deganayaal
Qayb gooni loo degan yahay ama guriga ka baxsan muuqaal ahaan
Qayb kasta oo ka mid ah gurigaaga oo maamul gooni ah leh tusaale ahaan martida lacagta bixiso
Shatiga madowga iyo caddaanka ah:
Haddii aad isticmaasho qalabka TV-ga si aad ugu duubto barnaamijyada teleefishinka, waxa aad u baahan tahay shatiga teleefishinka midabka leh xattaa haddii aad heysato teleefishinka madowga iyo caddaanka ah sababta oo ah qalabka TV-ga duubo wuxuu TV-ga u duubaa midab ahaan. Shatiga madowga iyo caddaanka wuxuu shaqeynayaa oo kali ah haddii sanduuqa dijitaalka uusan duubi Karin barnaamijyada teleefishinka.
Shuruudaha dheeraadka ah ee shatigaaga
Lacagta shatiga waa in la bixiyaa marka waqtigeeda la gaaro.
Adiga waxaad ku bedelin kartaa cinwaanka shatiga mid kale haddii cinwaanka loo bedelanayo yahay mid joogto ah.
Shatiga waala joojin karaa ama la celin karaa ama shuruudihiisa ayaa wax looga bedeli karaa iyadoo ogeysiis Adiga laguu soo diro ama ogeysiis guud oo lagu daabici doono barta internetka BBC’da, haddii ay lagama maarmaan u aragto BBC’da, iyo warbaahinta kale ee qaranka.
Saraakiisheena waxay booqan doonaan goobta shatiga leh si ay u xaqiijiyaan diiwaanadeena una baaraan qalabka TV-ga waqti kasto, laakiin qasab kuguma ah inaad ogolaatid inay soo galaan.
Adiga waa in uusan qalabkaaga TV-gu arbushaad ku sameyn qalabka raadiyayaasha iyo teleefishinada kale.
Shatigaaga waxaa soo saartay iyadoo la metelayso BBC hay’adda Shati bixinta TV-ga.
Wixii macluumaad dheeraada ah oo la xiriiro haddaad u baahan tahay Shatiga TV-ga la xiriir www.tvlicensing.co.uk.
Fadlan ogow in qodobo iyo shuruudo gooni ah lagu dhaqo noocyada soo socdo ee Shatiga TV-ga: hoteelada iyo Shatiga TV-ga qaybaha mobile’ka ah, ARC Shatiga TV-ga concessionary’ga iyo Shatiga TV-ga qaybaha madadaalada. Haddii aad heysato mid ka mid ah waxyaalahan, fadlan ka tixraac shatigaaga wixii qodobo ama shuruudo gaara ee la xiriiro ama nalaga soo xiriir wixii macluumaad ah.